शिविर र बच्चाहरु संग रोटी - हामी तपाईंलाई बताउनेछ कि यो कसरी काम गर्दछ
Stockbrot व्यञ्जनहरू - द्रुत र तयार गर्न सजिलो
क्लासिक स्टिक रोटीको लागि व्यञ्जन
मीठो स्टिक रोटी
क्याम्प फायर को आसपास खाना को लागि सुनवाई व्यंजनहरु
एक बर्तन र कम्पनी बिना क्याम्पस फायरको कुकुर
शिविरबाट मिठाई - चकलेट केला दुर्घटना
एक कैम्पफ़ायर साँझ भोकै रोमान्टिक छ र स्वचालित रूपमा हामीलाई अर्को पटक, अरु संसारमा पनि केहि लाग्छ। बच्चाहरु को लागि यो शुद्ध साहसिक छ र हरेक सफल गर्मी को पार्टी को हाइलाइट। तर म कसरि पुग्छु कैम्पफ़ायर सही? यो कसरी सुरक्षित छ? र त्यहाँ सबैलाई अनुमति छ कैम्पफ़ायर संगठित?
क्याम्प फायरको लागि ठाउँ छान्नुहोस्
पहिलो, पहिलोको लागि स्थान कैम्पफ़ायर छान्नुहोस्। जाहिर छ यो जंगल मा बिल्कुल निषिद्ध छ। साथै, कम से कम एक सय मिटरको सुरक्षा दूरी हेर्न सकिन्छ। अन्य चीजहरूमध्ये, यो आगोको उडान चल्किन्छ। वन आगो चाँडै उपेक्षा गरिन्छ र प्रकृति र वन्य जीवनमा पर्याप्त क्षतिको कारण हुन्छ।
यो कैम्प फायरलाई कसरी सफल हुन्छ
यदि तपाइँ आफ्ना छोराछोरीसँग यी नियमहरू छलफल गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरू साहसिक सिक्न सक्नेछन् कैम्पफ़ायर आगो र अग्नि सुरक्षाको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू। कहिलेकाहिँ त्यहाँ बारबेक्यू क्षेत्रमा उपयुक्त फायरप्लेसहरू छन्, अन्यथा तपाइँ पनि अधिकारीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाइँ वा तपाइँका साथीहरूसँग एउटा ठूलो बगैंचा छ जहाँ तपाईं त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ कैम्पफ़ायर उजुरी गर्न सक्छ।
क्याम्प फायरमा सुरक्षा
गैर-ज्वालामुखी सामग्रीको साथ चिमनी वरिपरि स्पेस संलग्न गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। वरिपरी एक ढुङ्गा चक्र र आधारको रूपमा रेत यस उद्देश्यको लागि उपयुक्त छ।
साथै, तपाईले सधैं आकस्मिकका लागि केही चीजहरू राख्नुपर्छ, उदाहरणको लागि एउटा भारी कम्पास वा आगो बुझानेवाला।
हावा र मौसमले पहिले देखि नै माथि उल्लेख गरेको स्पार्कहरू हुन सक्छ र त्यो कैम्पफ़ायर चाँडै खतरा हुन सक्छ। यदि हावा निकै बलियो छ भने, तपाइँ सुरक्षा कारणहरूको लागि हुनुपर्छ कैम्पफ़ायर बरु पहिले नै छोटो मेटाउनुहोस्, भित्तामा बच्चाको मूड खराब हुन्छ। सुरक्षा पहिले!
सानो संकेत: पर्याप्त ओक्सीजन प्राप्त गर्न अग्निको लागि बागलुङमा सानो स्थान छोड्नुहोस्। यो रिक्ति सधैं पवन दिशाको सामना गर्नु पर्छ।
पृष्ठ पृष्ठ क्याम्प फायर र मार्शमेलो
त्यो गर्न कैम्पफ़ायर अनियमित गर्न, तपाईंलाई आवश्यक छ, जस्तै नामले तालाबन्दी गर्छ। टाइन्डर सजिलै ज्वलंत सामग्री हो, सजिलो घाँस वा बर्च बार्क उपयुक्त छ। यो इज्जत एजेन्टलाई चिमनीको बीचमा जमा गरिएको छ र यसलाई सानो शाखा काँटामा राखिन्छ।
अब तपाई काठको पिरामिड लक्जरी र टुप्पोमा टाँस्नुहुन्छ र अन्तमा आगोमा आगो लगाउने एजेन्ट राख्नुहुन्छ। बिस्तारै उडिरहेको र वायुमण्डल (यसलाई ओभरड नगर्नुहोस्!) टावर्सको आगो शाखामा फैलियो। को कैम्पफ़ायर दयालु छ!
कैम्प फायरमा पाक कला
त्यसो कि यो धेरै अधिक धूम्रपान गर्दैन, आगो अक्सिजन आकर्षित गर्न सक्षम हुनु पर्छ, त्यसैले सधैं हवा आपूर्ति मा ध्यान दिनुहोस। धेरै महत्त्वपूर्ण: कन्फिभिलियल क्याम्प फायर हल गर्नु अघि, त्यो हुनुपर्छ कैम्पफ़ायर पूर्णतया बाहिर अझ धेरै पटक नियन्त्रण गर्नुहोस् र जोखिम अग्लो भन्दा थोडा लामो पर्खनुहोस्!
क्याम्प फायरको वरिपरि बारबेक्यूहरू
एक कैम्पफ़ायर यो केवल आधा राम्रो हुनेछ यदि तपाईं आफ्नो खाना तयार गर्न सक्नुहुन्न। स्टक रोटी, ग्रील्ड आलु र स्याउजले जंगली पश्चिमी भावना बढाउँदछ र न केवल सबै बच्चाहरूको लागि राम्रो, बल्कि वयस्कहरूको लागि पनि स्वाद दिन्छ। सबै भन्दा राम्रो - यो धेरै काम गर्दैन र सधैं राम्रो हुन्छ। खाना खाएर यो विशेष गरी राम्रो हुनेछ, जब तपाईं गिटार अनप्याक गर्नुहुन्छ र सँगै गाउनुहुन्छ! यसले किशोरीलाई पनि आनन्द दिन्छ!
फ्रान्सेली रोटी धेरै सजिलो र छिटो तयार छ। बच्चाहरु को लागी, जब यो शिविर को गिलिंग या चारों ओर जब यो तब हुन्छ तब सम्म सबै भन्दा ठूलो चीज हो कि आत्म-संकलित र तेज लीक मा फँस गयो।
हजेल शाखाहरू प्रयोग गर्ने सबै भन्दा राम्रो हो - जुन गैर-विषाक्त हुन्छ - र छाल पहिले देखि माथि हटाउनुहोस्जसको आसपास आटा एक साँप जस्तै भयो। सबै पछि, तपाईं खुल्ला आगोको चमकमा तयार स्टिक्स र आटा पकड्नु पर्छ र सानो धैर्य छ - तपाईले गरेका सबै कुराहरु फ्रान्सेली रोटी!
को लागि मूल नुस्खा फ्रान्सेली रोटी एक खमीर आटा हो र एक किलो चाराको साथ बनाइएको छ, अधा लीटर पानी (तातो), एक चम्मचको नुन र सुकेको खमीरको दुई वटा पात। यस रकमले पन्ध्रको अंश बनाउँछ, यसको आधारमा तपाइँ कतिपय लुगाको पछि लाग्नु हुन्छ।
खमीरको साथ रोटी नुस्खा टाँस्नुहोस्
अवयवहरू सबै पहिला मिश्रित हुन्छन्, एउटा क्लासिक खमीर आटा बनाउँदछ, जुन धेरै राम्रो तरिकाले घुमाउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईं उनको लागि आटा छोड्नुहोस् फ्रान्सेली रोटी बाकी5देखि छ घण्टा सम्मको लागि त्यो ऊ बढ्न सक्छ। एक ठुलो ठाउँ यो लागि उपयुक्त छ।
त्यसपछि आटाले दोस्रो पटक घुमाएको छ र सानो बलमा घुमाईन्छ (जसलाई धेरै रोटी बन्छ)। यो नुस्खाले तपाईंलाई पन्ध्र को लागी लगभग 15 चिकन आकारको बल प्रदान गर्दछ स्टक रोटी, बलहरू एक कटोरामा राम्रो तरिकाले ट्राभल गर्न सकिन्छ र त्यसपछि बच्चाहरु साइटमा अगाडी बढ्न सकिन्छ।
या त तिनीहरू बल ब्रेक गर्छन् वा उनीहरूले आफ्नो हातमा सांपमा रोल गर्छन्, जुन तिनीहरू छडीको अन्ततिर लिपिन्छन्। वैकल्पिक रूपमा, निस्सन्देह, तपाईं गोलेटहरूको सट्टा साना सांपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो सजिलो छ बच्चाहरु।
Savory stick stick
यस आधारभूत नुस्खा पछि तपाईं सक्नुहुन्छ स्टक रोटी पक्कै पनि केहि चीजहरू मसाले। यदि तपाई मनपर्थ्यो भने, तपाईं आटामा फेलेल, जीराणु, धनी र पनि लसुनको मसलाहरू थप्न सक्नुहुनेछ। साथै जंगली लसुनको राम्रो स्वाद दिनुहुन्छ र यो भूमध्यसागरलाई मनपर्छ, प्रोभेसको जडीबुटीले आटामा पनि प्रक्रिया गर्न सक्छ। वैसे, ग्रील्ड आलु र साउसेज क्लासिक वा मसालेदार व्यक्तिहरु संग धेरै राम्रो स्वाद गर्दछन फ्रान्सेली रोटी!
साथै धेरै स्वादिष्ट र केहि फरक फरक मिठो छ फ्रान्सेली रोटी, यसले आधा किलोको आटा लिन्छ, चीनीको 80 ग्राम, वेनिला शर्कराको प्याकेट, एक प्याकेट खनिज, नमकको चुरोट, एक लिटर दूध, एक अण्डा र सय ग्राम मक्खन।
माथिको रूपमा, एक खमीर आटा पहिला अवयवहरूबाट तैयार गरिएको छ, जुन राम्रो घण्टापछि पहिले गहिरो ठाउँमा धेरै घण्टासम्म जान सकिन्छ। थप कार्यविधि क्लासिकलको साथ जस्तै छ फ्रान्सेली रोटी.
यद्यपि, यहाँ वर्णन गरिएको रकम केवल सात देखि दस वर्ष हो स्टक रोटी. हाइलाइट: कभर माथि पकाउने र दालचीनी र शर्करासँग छिट्टै पछि मीठो रोटीको माथि निस्कनुहोस्!
महत्त्वपूर्ण टिप्पणीहरू: बच्चाहरु संग रोटी बनाउँदा ध्यान दिनुहोस! रोटी साँच्चै तातो छ, बच्चाहरूलाई अग्रिम भन्नुहुन्छ। र आफैलाई शान्त रहनुहोस्: यो सामान्यतया सामान्य छ कि रोटी फेरि र फेरि जलिरहेको छ, विशेष गरी बच्चाहरुका लागि।
लामो समयदेखि क्याम्पफ्रेज एक महत्त्वपूर्ण विशेषता रहेको छ। यसले शरीर, डिसुफ लुगा लगाउँछ, जनावरहरू बेच्दछ, सतावटको संकेतको रूपमा सेवा गर्छ र न्यानो भोजन तयार पारिएको हुन सक्छ।
तर यो सुरू गर्नुअघि पिरामिडमा सूखी दाउराको ढोका र आगो लगाएर राखिएको छ। यदि आगो खरानी छ भने, काठको रूपमा आवश्यक पर्न सक्छ। अब उत्कृष्ट आउटडोरमा रोमांटिक खाना पकाउन सुरु गर्ने सही समय हो। पकाउने विधिहरू र उत्कृष्ट नुस्खा विचारहरू छन् जो आश्चर्यजनक रूपमा सरल छन्। यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, तपाईं हरेक अवसरको लागि एक धेरै व्यक्तिगत क्याम्पस मेनु एक साथ राख्नुहुन्छ।
पाक कला विधिहरू, नुस्खा विचारहरू र तयारी
हाम्रा पुर्खाहरू खुसीको ढुङ्गा बर्तनमा पकाएका छन् वा खुल्ला सुन्तलामा शिकार। आज, तथापि, बॉइलरहरू, बर्तनहरू, प्यानहरू, गेट्स वा स्किभहरू प्रयोग गरिन्छ। धेरै सरल जीवनशैली विधिहरूको अतिरिक्त, त्यहाँ उपयुक्त खाना पकाउने पोषण सहित धेरै आधुनिक प्रविधिहरू छन्। यहाँ केहि व्यञ्जनहरू प्रयास गर्न र स्वाद गर्नका लागि यहाँ छन्।
क्याम्प फायरबाट अवशिष्ट गर्मीको साथ तपाईंले न्यानो राख्न सक्नुहुन्छ
रोटी भिन्न छडी
6 व्यक्तिहरूको लागि सामग्री
1 काजीको किल
2 क्यूब ताजा खमीर
पानीको 500 मिलीलीटर
80 जी कोठा कमर मक्खन
3 EL समुद्री नमक
1। एक कटोरा मा आटा राख्नुहोस्। बीचमा एक कटोरा बनाउनुहोस् र खमीरमा खसेको छ। एक सानो लुकवात पानी जोड्नुहोस्, ताकि केहि आटा र खमीर संयोजन एक Vorteig को। 20 मिनेटको लागि आवरण गरौं।
2। बाँकी पानी, मक्खन र नुन जोड्नुहोस् र राम्रो तरिकाले घुमाउनुहोस्। आटा दोहोर्याउँदा फेरि फेरि आवरण गर्नुहोस्।
यदि तपाईं अधिक स्वाद चाहनुहुन्छ भने, तपाईं जडी बूटी, मसाले, अनाज अनाज, पनीर क्यूब्स, जैतून, सूखे टमाटरहरू वा बेकन क्यूब थप्न सक्नुहुन्छ - रचनात्मकता कुनै सीमा छैन!
3। खरगोश आटा, रोलहरूमा फारम र पतली स्टिकको शाखा टिप वरिपरि लुगा लगाएर। थोरै दूरीको साथ, क्यान्सरको नजिक लिपटे आटा राख्नुहोस्। अब बन्द गर्नुहोस् र तब सम्म कि रोटी को वरपर गोल्डन ब्राउन हो। सीधा बाट छड़ी खाओ।
सुझाव: छाल र पानीबाट लिपि हटाउनुहोस्। त्यो कसरी जलाउन सक्दैन। पर्दाहरूमा तपाईं स्वादिष्ट सॉसेज, सम्पूर्ण माछा, शशिक्षा वा सब्जी स्केवरहरू तान्नुहोस्।
हार्दिक cauldron स्टव
सामग्री6व्यक्तिहरू
4 लसुन लौंग
2 ताजा पेपरिका
1 मिर्च पोड
4 EL तेल
जमीन मासुको 1 किलो
खुट्टा टमाटरको2डिब्बा
6 खुट्टा, diced आलु
1 मकैको गर्न सक्छ
1 लाल सेमको हुन सक्छ
1 सेतो सेमको हुन सक्छ
ताजा मर्मोरमको 1 गुच्छा
1। खुट्टा प्याज र लसुन पासा। मिर्च कोर र मिर्चको साथ उनलाई काट। क्याम्प फायरमा राख्नुहोस् वा केतल वा बर्तन राख्नुहोस्। यसको पर्याप्त गर्मी नभएसम्म पर्खनुहोस्।
2। तेल जोड्नुहोस्, प्याज, पेपरिका, मिर्च चश्मा दिनुहोस्। मिनिसिङ मासु र सट राम्रोसँग जोड्नुहोस्।
3। डिब्बाबंद टमाटर र आलुलाई हैक र नमक र काली मिर्चको साथ मौसम थप्नुहोस्। कहिलेकाँही कहिलेकाहीँ एक्लो हिउँदको साथ 45 मिनेटहरू उकालो पार्नुहोस्। यदि आवश्यक छ भने, एक सानो पानी जोड्नुहोस्, ताकि केहि पनि जलाउँदैन।
4। अब मकै, सेम र बर्तनमा राख्नुहोस्। सीजन फेरि, पक्कै ताजा ताजा मर्जोरम चोरी, यो सेवामा छिट्टै छिटो ढोकामा जोड्नुहोस्, हलचल र यसलाई छोटो पार गरौं।
जमीनको माटो, गोलाश, जीनिस, कास्लर, कुखुराको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सुझाव: पनीर वा पकाएको आलु गार्निशको रूपमा उपयुक्त छ। पछिल्लो पन्नीमा पछाडि पगाल्नुहोस् र 30 मिनेटको लागि हट राखमा राख्नुहोस्।
अतीतमा, कोमडेडहरूले खाना बनाउनका लागि cookware प्रयोग गरेनन्, तर परम्परागत माटो कोटमा पकाइएको थियो। यस विशेष तयारीको लागि तपाईंलाई माटो चाहिन्छ। शिल्प, कलाकार वा DIY स्टोरमा प्रस्तावित छ।
पुटर डे लक्स मा मिट्टी कोट मा
2 देखि3किलो मिट्टी (पोल्ट्री आकारमा निर्भर गर्दछ)
1 ताजा गित गरिएको टर्की
3 लसुन लौंग
3 EL जैतून का तेल
2 EL प्रिय
2 EL टमाटर पेस्ट
6 EL ताजा कटा हुआ जड़ी बूटियों मिश्रण (थाइम, टकसाल, रस्सरी)
समुद्री सागर, काली मिर्च
1। क्रश लसुन र तेल, हनी, टमाटर पेस्ट, एक चूना र हर्बल मिश्रणको रस थप्नुहोस्। सबै सामग्रीहरूलाई क्रीमयुक्त पेस्ट र नमक, काली मिर्चको साथमा मौसम मिलाउनुहोस्। टर्की धुनुहोस्, सुत्नुहोस्। स्वादिष्ट मसालेदार मिश्रण संग बाहिर र भित्र रुकाउनुहोस्। यदि तपाइँ मनपर्यो भने, टर्कीले पहिले नै 1 दिन पहिले तयार र खाली गर्न सक्दछ! टर्की टुरको साथसाथै एकसाथ टाँस्नुहोस् र सम्पूर्ण पोल्ट्रीलाई सब्जीको पत्तिहरू (केला र सुवेय गोभी) संग राख्नुहोस्।
2। सम्भावना हावा बुलबुलेबाट बच्नको लागि ताजा माटोलाई बलियो बनाउनुहोस्। असीमित काठको साथ "माटो आटा" रोल गर्नुहोस्। अहिले पूर्णतया टर्कीको साथमा सामूहिक साथ।
सुझाव: थोडा मिट्टी र पानीको साथ मात्र ग्लु सम्भव छ।
3। लगभग 10 मा 20 सेन्ट उच्च एम्बर तहमा टर्की राख्नुहोस्। जब माटो सुकेपछि, डिलक्स क्ले पुराप्यूटर पूर्णतया हट कङ्गोहरूसँग राखिएको छ। वजनमा निर्भर गर्दछ,2पकाउँदा3घण्टा सम्म लाग्छ। त्यसपछि आगो तापक्रमबाट जलेको मिट्टी लम्प लिनुहोस्। छिटो ह्यामरको साथ खोल्नुहोस्, धेरै हट भाप एस्केपहरू। ताजा सलाद, पकाएको आलु वा रोटी रोटी संग सेवा गर्नुहोस्।
6 पकाउने केले
चकलेटको 1 पट्टी
1। चाकू 1,5 देखि2सेन्टिमिटरको साथ गहिरो रूपमा केला छाला (लुगा सहित) लाई काट्नुहोस्। तयार उद्घाटनमा लुगामा चकलेट टुक्राहरू राख्नुहोस्।
2। केलाहरूलाई निर्दोष आगोमा राख्नुहोस्। ध्यान, खुल्ला पक्ष शीर्ष माथि हुनुपर्छ। केला छाला रङमा कालो छालासम्म पर्खनुहोस्। चकलेट सजिलै पिघ्न सुरु गर्नुपर्छ। ध्यानपूर्वक मिठाई हटाउनुहोस् र आनन्द लिनुहोस्।
पृष्ठ क्याम्प फायर
संख्याहरू शिविरबाट प्यान्ट गर्नुहोस्